I-ASUS yenkampani iye yaqhubeka ikhuthaza amadivayisi ayo emakethe. Abasebenzisi bazi amabhodi womama avela kulo menzi, amakhadi wevidiyo, abaqaphi namanye amadivayisi. Le nkampani ingumdabu waseChina eChina, omncane kakhulu, kodwa usevele wakwazi ukuhola ezindaweni eziningi. Ama-laptops ahlukile. Namuhla sizoxoxa nge-ASUS R540SA-XX036T.
Ukubuyekezwa njenge-laptops njalo kuthola okuhle. Le nkampani ayikhathaleli nje kuphela ingxenye yezobuchwepheshe, kodwa futhi ngokuphathelene nokuthembeka kwayo yonke imodeli. Ngakho-ke, ama-laptops amaningi aphila iminyaka engaphezu kwengu-10 futhi abe ngumngani omkhulu kakhulu kumthengi. Ukubaluleka kwenkampani nakho kuzama ukulandela, kusuka lapha ukukhululwa kwamafomethi amageyimu amahle ayenqoba abadlali emhlabeni jikelele iminyaka eminingana.
Kufanelekile ukuphawula ukuthi ukubuyekezwa kwe-ASUS R540SA-XX036T (15.6 ") njalo kuthola izibuyekezo ezinhle ngenxa yokuzikhethela kwabo, naphezu kokuthandwa kakhulu kwamamodeli wezemidlalo, amamodeli womsebenzi wezinkampani asesidingo, futhi i-hero yokubuyekezwa kwethu yilelo kuphela.
Ngokuvamile, i-laptop yomthengi ihlale iyithandwa kakhulu, njengoba iyathengeka kakhulu, futhi naphezu kwenani elikhulu labadlali, abasebenzisi abaningi kakhulu lapho bethenga i-laptop iphishekela umgomo womsebenzi noma isifundo. Ngakho-ke, injongo ehlosiwe idlala indima ebalulekile ekukhethweni. Uma udinga i-laptop ephathekayo, enokwethenjelwa nelula, khetha i-laptop ASUS R540SA-XX036T (90NB0B31-M01020) nezinye izinguquko zayo.
Imodeli ingeyomkhakha othi "X", ogxilwe ngokuphelele kumamodeli webhajethi futhi angasiza kunoma ubani ofuna imoto esebenzayo. Ukuthuthukisa lesi sizukulwane, i-ASUS yazama ukungenzi amamodeli angabonakali ayengabonakali lutho. Wenza kanjalo ukuthi, naphezu kwezici zobuciko nokulula, i-laptop ihlonywe ngomklamo okhangayo kanye nobuchwepheshe obunikazi obungenasisekelo ngaso sonke isikhathi.
Ukubuyekezwa kwe-ASUS R540SA-XX036T kubonga kahle ukubukeka kwayo, isilinganiso samanani kanye nekhwalithi, isabelomali nokuthembela okuphelele. Ngesikhathi sokukhululwa, le divayisi yakwazi ukuhola ingxenye yayo, futhi konke ukuguqulwa kwayo kwakudingeka phakathi kwabasebenzisi.
Ibhokisi lapho idivayisi entsha ifanelana kahle kucatshangwe kahle. Isitayela esiqinile sitholwe lapha. Le nkampani ivame ukuthengisa ama-laptops ngamabhokisi ahlakaniphile kodwa ahlekisayo anolwazi oluncane, kodwa akhangele.
Ngaphambi kokuba umthengi abe ibhokisi le-matte, ngaphambili kwakukhona i-logo yomkhiqizi kanye nesiqubulo sakhe. Kwakukhona ulwazi oluthile olwakhelwe kulo modeli. Ngaphakathi kwebhokisi, akukho lutho olungenakuqhathaniswa: iyunithi yeshaja, ikhebula namadokhumenti.
Ukubukeka kwe-laptop ASUS R540SA-XX036T ukubuyekezwa kwamukeleke kakhulu. Imodeli ibukeka ihlanzekile futhi ihlelekile. Isembozo senziwe ngepulasitiki elimnyama eliphezulu elinomsoco wensimbi. Phakathi kwe logo ye-flaunts yenkampani. I-bottom does not stand out with anything that is normal, akukho ngisho ikhava ekhethekile engasuswa kalula ngokukhuphula nokuhlanza idivayisi.
Isixazululo esithakazelisayo kwakuyisikimu sombala. Uma ngaphandle komzimba kwenziwa ngombala omnyama nomthunzi obomvu, bese kuthi ngaphakathi, kuye ngokuthi ukuguqulwa, indawo yokusebenza yathola umbala okhanyayo obala, isibonelo, beige.
Ubukhulu be-laptop buphakathi, kodwa becabanga ukuthi lokhu kuyimodeli yenkambiso, bakhululekile ngokwanele ukuthutha i-laptop kusuka ekhaya kuya emsebenzini nasemuva. Ububanzi bemodeli babuyizingamamitha angu-38, ubude - 25 cm, futhi ubukhulu - cishe u-3 cm. Isisindo samukelekile - ama-kilogram amabili kuphela.
Ikhwalithi yepulasitiki, njengoba kushiwo ngaphambili, ezingeni eliphezulu kakhulu. Ubuso bayo buhle kumthinta, futhi ukuqina, njengoba isikhathi sibonisa, kuhle kakhulu. Ngendlela, zonke izakhiwo ziyi-matte, ngakho-ke akuzona ukungcola okubonakalayo nokucacile.
I-engeni yokuvulwa yesikhumbesi cishe ngama-135 degrees, okuyisisekelo esanele. Konke lokhu kuklanywa kusekelwa amazinyo amabili epulasitiki. Banamandla futhi balungisa kahle isivalo. Ngaphezu kwalokho, njengoba kukhonjiswa umkhuba, ukugqoka ukugqoka kunyukisiwe. Into kuphela abasebenzisi abathile ababengayithandi kuyindlela eqinile, engakuvumeli ukuthi uvule i-laptop nge ngesandla esisodwa.
Ngokuphathelene nalesi sigaba se-ASUS R540SA-XX036T ukubuyekezwa komsebenzisi wamanothi kunokuthokoza kakhulu. Ubuso bokusebenza bubukeka buhle futhi buhle. I-touchpad ihlehliswa kancane kusukela enkabeni kuya kwesobunxele. Awunayo okhiye abengeziwe okuzoba nesibopho se-PCM ne-LCP.
Ikhibhodi yohlobo lwesiqhingi ihlelwe kancane kulolu cala. Izihluthulelo zihamba kahle. Izinkinobho zine-stroke ethule, kanye nosayizi omncane. Akuwona wonke umuntu othanda ukungabi khona kweyunithi ehlukile yombhoshongo, kodwa ngokushesha usujwayele. Indawo ethandekayo ithathwe inkinobho yamandla, okokuqala ungakwazi ukuyiqaphela. Iyingxenye yeyunithi yekhibhodi futhi itholakala ohlangothini oluhlukile lwe-Esc.
I-ergonomics ye-laptop ihle. Kulula ukuyisebenzisa, ngokuyisisekelo, akukho amaphutha okwenzekayo. Ithole kalula zonke izakhi ekugcineni. Ngaphambili akukho lutho, ngaphandle kwezinkomba zokufakwa kwemisebenzi ehlukene ne-laptop ngokwayo. Futhi futhi kukhona indawo yomfundi wekhadi.
Isiphetho sangemuva sikhululekile kuzo zonke izintambo ezikhona. Ngakwesobunxele kukhona indawo yokufaka ishaja, kune-grill yesistimu yokupholisa, ngemuva kwayo iyisixhumi sekhebula le-intanethi, futhi i-pair of video imiphumela, USB kanye jack audio audio. Isiphetho esifanele sithathwe yi-drive kanye ne-Kensington lock ye-ASUS R540SA-XX036T. Amazwana avela kumakhasimende adidekile athathe umxhumeli ohlangene, ngemuva kokungavamile ngaso sonke isikhathi, kanye nenani elincane le-USB. Ngaphezu kwalokho, kukhona isikhala esanele ekupheleni kwesokudla ukuhlala nabanye abambalwa.
Kodwa ngesiboniso esivela kwenkampani sonke isikhathi kukhona okungalungile, ikakhulukazi uma sicabangela izindlela zebhajethi. Usayizi weskrini ungama-intshi angu-156 ngesinqumo esincane samaphikseli angu-1366 × 768. I-matrix ishibhile i-TN + ifilimu, abasebenzisi abaningi abakhononda ngayo, ukuthi ngandlela-thile baqonda le nkinga. Impendulo yayo eyinhloko akuyona imbala yokunikeza imibala ngokuphelele.
Zonke lezi ziphutha zisasekelwa yizingubo ezikhazimulayo zesikrini, okudala ukukhanya okungadingekile. Ama-angles wokubuka ajwayelekile, ngakho-ke i-angle enkulu yokuvulwa kwendwanguzo ayinasisekelo. I-backlight ekuboniseni inikeza izinga elihle lokukhanya, nakuba ngosuku olukhanyayo ngaphandle lingase lungakhululekile ngokwanele ukusebenza.
Njengoba kushiwo ngaphambili, uchungechunge lwama-laptops ezabelomali oluthola ukuhlukahluka okuningi kwezici zobuchwepheshe. Sinokubuyekezwa kwe-ASUS R540SA-XX036T (i-laptop). Izici zokubuyekezwa zazihle, njengokwesimiso abaningi babona ukuthi lokhu kuyisidingo esivamile, okungekufanelekile ukulinda ukusebenza okungakaze kube khona.
Lolu khetho lusebenza ngesisekelo se- Intel Celeron N3050, enamakholethi amabili. Ukuvama kwe-chip akudluli ku-1.6 GHz. Nakuba, njengokwenza okuboniswayo, ukweqa ngokweqile kuvumela ukwandisa ijubane ku-2166 MHz. Iprosesa ingasebenza kuphela ngemifudlana emibili yolwazi, ngakho ukusebenza kwayo kuphakathi. Yadalwa ngobuchwepheshe besistimu engu-14-nm ku-micrositecture yeBraswell.
I-chip ine-adapter eyakhelwe ngaphakathi enezihluzo esebenza ngama-frequencies kuze kube ngu-600 MHz futhi isekela i-DirectX 11.2 ne-OpenGL 4.2. Imemori yevidiyo ithatha ivolumu kusuka ku-RAM futhi ingasebenza nge-1 GB. Ngendlela, i-RAM lapha ine-DDR3L-1600 MHz futhi i-2 GB. Kukhona ukwesekwa okungu-8 GB. Isikhwama sediski esinzima sifinyelela ku-500 GB.
Ngokubanzi, ukubuyekezwa kwe-ASUS R540SA-XX036T kunemiphumela emihle. Amakhasimende adumisa ubukeka obuhle futhi obukhangayo be-laptop, ikhwalithi yomhlangano wayo kanye nobukhulu be-compact. Ikhibhodi yohlobo lwesiqhingi yaba yinto ekhululekile ekusebenziseni. Umsindo wawuhle futhi. Siyadumisa ikhwalithi yayo kanye nomsindo omnandi.
Ipulatifomu ye-hardware njengamanye wonke yaba namandla okwenza kahle ne-ergonomic. Isebenza ngesistimu yokupholisa okuhle, futhi ucabangela ukuthi lokhu kuyi-laptop yomsebenzisi evamile, i-cooler yanele ngokwanele.
Kokuphutha okwamanje kubonwe isikrini esibuhlungu kakhulu, okuyinto, ngokuyisigameko, esihlangabezane kaningi, ngisho nakweminye uchungechunge oluvela kulo mkhiqizi. Uthole ukunikezwa kombala okungalungile, ukugqoka okwesibhakabhaka okuvutha kakhulu, nama-angles okubukela okubi. Ukusebenza okubonisiwe nokuphansi, nakuba leli phuzu selivele licacile ekuchazeni imodeli.
Ungayifaka kanjani i-processor kwikhompyutha ephathekayo? Indlela ephephile
Yonke imininingwane mayelana ne-HP ProBook 4515s laptop
I-Netbook Packard i-Dot S: imininingwane, ukubuyekezwa, izithombe nokubuyekezwa
Ukufunda yolimi lwanamuhla Russian. Kuyini "nyashka"?
Ilayisensi - imvume ...
Abathandwayo amagugu tattoo. Tiger emasikweni ahlukene
Mizhhiria Yanukovych: inganekwane zababusi
Monkey Cancer: nezimfanelo ezakhayo, ukuhambisana
Trichologist - ubani lo? Udokotela-trichologist aphulukisayo?
Krabov Vadim: biography nezincwadi